Maungtintyin: April 2011
သိစိတ်ရဲ့အဆင့်ဟာ မရေမတွက်နိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ သိစိတ်ပါပဲ။ ဒီပြဇာတ်က ရေတွက် မရနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာက အဆုံးမရှိပါ။ ဘုရားသခင်ဟာ အနန္တ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရာရာတိုင်းဟာ မရေမတွက်နိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဆင့် ၁၀- ရှိတယ်၊ အဆင့် ၂၀-ရှိတယ် ဆိုတာ မပြောဆိုနိုင်ပါ။ အဲဒါများက မရေမတွက်နိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ထင်မြင်ယူဆချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀ဟာ အဆုံးမရှိ ခရီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင်က အဲဒီကို အားလုံးရောက်ရှိပြီးပြီ - ဒါက အဆုံးသတ်ဖြစ်တယ် -ဆိုတာကို မပြောဆိုနိုင်ပါ။ ဒါက အမြဲတမ်း အသစ်စတင်ခြင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ဟာ အရာဝတ္ထု နှစ်ခုအကြား ခရီး, အကွာအဝေးကို ဆိုလိုပါတယ်။ များစွာသောအချိန်တွေမှာ အကျွန်ုပ်တို့က အတိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်မှာ ဖြစ်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကွာအဝေး, ခရီးကို ဖန်တီး ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကယ်၍ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အချိန်မှ အပြင်သို့ အဝေးသို့ ထွက်ခွါချင်လျင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အတိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှု အချုပ်အချယ်ကင်းမှုကို ရှိရပါ့မယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ယင် အကျွန်ုပ်တို့ အနာဂတ်မှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အနာဂတ်နဲ့အကျွန်ုပ်တို့အကြား အကွာအဝေး, ခရီး တစ်ခုကို နောက်ထပ် ဖန်တီးကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ယခု ပစ္စုပ္ပန်မှာ မနေထိုင်ဘဲ အနာဂတ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
အချိန်ဟာ ယခုပါ။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကွာအဝေး- ခရီး တစ်ခုကို ဖန်တီးကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အတိတ် ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ် တစ်ခုခုမှာပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အချိန်မှ လွတ်လပ်မှုကို လိုချင်လျင် အတိတ် အနာဂတ်မှ လွတ်လပ်မှုကို ရရှိရပါ့မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာ ပစ္စုပ္ပုန်ခဏတာဖြင့် အမြဲတမ်း ပစ္စက္ခမျက်မှောက်မှာ ဖြစ်ကြရပါ့မယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခယရိုကျိုးလွန်းလျင် အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခရီးလမ်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မျက်ခြည်ပျက်ပျောက်ဆုံးသွားစေပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်စုံတစ်ခုပေါ်မှာ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိလျင် လွတ်လပ်ကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စွန့်ခွါထားပစ်ခဲ့ဖို့ လေ့လာသင်ယူလျင် အပြည့်အ၀ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အပူအပင်ကင်းကြပါလိမ့်မယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဆက်လက်ပွေ့ပိုက်ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အကျွန်ုပ်တို့က အေးအေးလူလူ လွတ်ငြိမ်းခွင့်မရှိပါ-လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဦးစွာပထမ ချန်ထားရစ်ဖို့ လေ့ကျက်သင်ယူပါ။ ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ မပိုင်ဆိုင်ပါနဲ့ -လက်ဝယ်ရှိဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ အတိတ်အနာဂတ်မှ လွတ်လပ်မှုကို ရယူပါ။ အချိန်က သင်နှင့်အတူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ လွတ်လပ်မှု အပြည့်အ၀ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘ၀ရဲ့တန်ဖို့း အသက်ရှင်သန်မှုရဲ့တန်ဖိုးကို သဘောပေါက်နားလည်ခြင်းဖြင့် အဲဒီလိုပြုလုပ်ဖို့ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ရဲ့ အရေးပါမှု တန်ဖိုးရှိမှုကို မသိကြပါ။ ဒါ့ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အတံ့ကို ဖြုန်းတီးပစ်ပါတယ်။ အကျွနု်ပ်တို့ဟာ ရှင်သန်နေထိုင်မှုဘ၀မှ ငေးတိငေးမော အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ အဝေးသို့ အမြဲတမ်း ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အတိတ်ကို သတိတရရှိခြင်းများဖြင့် အတိတ် ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အနာဂတ်ကို ကြောက်လန့်ပူပန်ကြပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန် လူသားဘ၀- ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းရဲ့ ဦးတည်ရာ လမ်းခရီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှ အမြဲတစေ ဝေးကွာနေကြပါတယ်။
ပါဝါ, ယခုမျက်မှောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုဟာ အလွန်ကြံ့ခိုင်သန်မာပါတယ်။ အလွန်ပဲ လှပပါတယ်။ အလွန့် အလွန်ပဲ ကြီးကျယ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သင်က သင့်ရဲ့မှတ်ညဏ်ကို လွဲသွားတာ လက်လွှတ်လိုက်ရတာ ရှိလိမ့်မယ်မဟုတ် - ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဘာ့ကြောင့် မှတ်ညဏ်ကို မှီငြမ်းကိုးကားပါသလဲ? တောင်းခံပါသလဲ? တိုင်တည်ပါသလဲ? အကြောင်းက သင် တစ်စုံတစ်ခုကို လွတ်သွားပါတယ်။ သင် တစ်စုံတစ်ခုကို မမိလိုက်ဘဲ လွဲချော်သွားတဲ့အခါ သင်ဟာ အယ်လ်ဘမ်မှတ်တမ်းကို ဖွင့်ပါတယ်။ ယခုပါဝါ ပစ္စုပ္ပန်စွမ်းအားဟာ အလွန်ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာ ဘယ်အရာကိုမှ လွတ်သွားလိမ့်မယ် လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘဲ ပြည့်ဝလာပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ အကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအားများက ပိုလို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။ အများအားဖြင့် အတိတ်ကို သတိရဖို့ ထောက်ကူဖြစ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ညဏ် အကျွန်ုပ်တို့မှာ ရှိပါတယ်။ မျက်မှောက်ပစ္စက္ခမှာ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ မှတ်ညဏ်အပေါ်မှာ အမှီပြုအားထားဖို့ မလိုအပ်တော့ပါ။
လူသားစိတ်ကို တိုးတက်ကြီးထွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘာဝဖြစ်စဉ်များရဲ့ နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဟာ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကို အကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကို တိုးမြှင့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘ၀ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သာလျင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိရှိသမျှ သဗ္ဗရနံပေါင်းဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဒါမှမဟုတ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဘဲ - ဆင်းရဲဒုက္ခမရှိဘဲ ဒါမှမဟုတ် ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် ဖြစ်စဉ်များ ပြုပြင်စီမံမှုများ - လက်တွေ့သုတေသနများ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ ဒီလက်နက်တန်ဆာပလာ အားလုံးက လူသားကို များစွာ သိစိတ်ဖြစ်အောင် အသိနိုးကြာင်းအောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အဲဒီ သိစိတ်နှင့် သက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ လှုပ်ရှားရွေ့ လျား နေပါတယ်။ ပြောင်းလဲအစားထိုးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြဇာတ်ကို ကြည့်ရှု့နေတဲ့ အသိ သက်သေများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို နှောင့်ယှက်ခြင်း မရှိပါ။ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မရှိပါ။ ပျော်ရွှင်ယုံ သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မဟာ ကြီးကျယ်တဲ့ စကားတစ်လုံးပါ။ ထိုင်ခုံရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာသို့ သင့်ရဲ့ဓမ္မကို ခေါ်ယူ သယ်ဆောင်လာပါ။ အကြောင်းက သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် လှုပ်ရှာမှုကို သင် စီမံညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။
ဘ၀ဟာ အပြောင်းအလဲ အတက်အကျဖြင့် ရွေ့လျားလှုပ်ရှားနေပြီး သွားလာရွေ့လျေားနေတဲ့ အပြောင်းအလဲ အတက်အကျမှာ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ သိစိတ်ဟာ လမ်းညွှန်ပါပဲ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, April 13, 2011
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၁
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်က ကမ္ဘာ ကြီးကိုတတိယစစ်ကြီးဖြစ်မည့်ဘေး မှ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သူမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တောမြို့လေးတမြို့တွင် သာမန်ကျောင်းဆရာလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူဟုဆိုလျှင် ကြားရသူ အပေါင်း အံ့သြပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ကမ္ဘာကြီးကို စစ်မီးလျှံ အန္တရာယ်က ကယ်တင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်မှာ အခြားသူမဟုတ် မြန်မာ့သားကောင်းရတနာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ဆိုသူပင်ဖြစ်သည်။
ဦးသန့်ကို ၁၉ဝ၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်သောကြာနေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပန်းတနော်မြို့၌ အဖဦးဖိုးနှစ်၊ အမိ ဒေါ်နန်းသောင်တို့ မှ ဖွားမြင်ခဲ့လေသည်။ မွေးချင်း ၄ ယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဖခင်ဦးဖိုးနှစ်သည် ကာလကတ္တား မြို့ (ယခုကိုလ်းကားတား) အထိ သွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရာ အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းစွာတက်ကျွမ်းသူဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်က မြန်မာလူမျိုးများတွင် အင်္ဂလိပ်စာ တတ်ကျွမ်းသူ ရှားပါလှရာ၊ မောင်သန့်လေးမှာ ဖခင်ထံမှ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်စာပေ ဗဟုသုတတို့ကို သင်ယူလေ့လာ ဆည်းပူးခွင့် ရရှိခဲ့လေသည်။
မောင်သန့်သည် ငယ်စဉ်ကပင် စာရေးဆရာလုပ်ရန် ဝါသနာ ထုံခဲ့ရာ ရှေးခေတ်မြန်မာစာပေ ပညာရှင်ကြီးများရေးသားခဲ့သော ပျို့၊ ကဗျာ၊ မော်ကွန်းရာဇဝင်စသည့် ရှေးစာဟောင်း ပေ ဟောင်းများနှင့် ရာဇဝင်များကို အချိန်ရလျှင်ရသလို လေ့လာလိုက်စားခဲ့သည်။ ဤသို့ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၊ ရှင်မဟာ သီလံဝံသမှ စ၍ နတ်ရှင်နောင်၊ နဝဒေး၊ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်၊ မြဝတီမင်းကြီးဦးစ၊ စလေဦးပုည အဆုံး မြန်မာစာဆို တော်ကြီးများ၏ လက်ရာအဖုံဖုံကို လေ့လာဖတ်ရှုမှတ်သားခဲ့သည်။
မောင်သန့် ၁၂ နှစ်သားအရွယ်မှာပင် ဖခင်ဖြစ်သူ၏စာအုပ်စင်မှ ရှိတ်စပီးယား၊ နာမည်ကျော် စုံထောက် စာရေးဆရာ ဆာအာသာကိုနင်ဒွိုင်း စသူတို့၏ အင်္ဂလိပ်ဝတ္တုကြီးများကို မွှေနှောက်ရှာဖွေ၍ ဖတ်ရှုတက် နေလေပြီ။
သို့သော် မောင်သန့်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် ဖခင်ကြီးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ၊ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းသောင်မှာ သားလေးယောက်နှင့်ဘဝကို ရုန်းကန်ကြိုးစားရတော့သည်။
၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ကိုသန့် ပန်းတနော်အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်၍ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် ကိုသန့်နှင့်ရင်းနှီးခင်မင်စွာ ပေါင်းသင်းကြသည့် သူငယ်ချင်းများတွင် နောင်တချိန်တွင် ထင်ရှားလာမည့် မိတ်ဆွေအများအပြားပါဝင်ကြသည်။
အဝတ်အစားကို ပါးပါး လွှားလွှားဝတ်ဆင်လေ့မရှိပဲ၊ သေသေသပ်သပ် ဖြူဖြူစင်စင် ဝတ်စားပြီး အမြဲအေးဆေး၍လန်းလန်းဆန်းဆန်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတက်သော ကိုသန့်ကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများက ချစ်ခင်လေးစားကြသည်မှာ မဆန်းလှပေ။
သို့သော် ကိုသန့်တက္ကသိုလ်တွင် ဥပစာတန်းအောင်မြင်သည့်နှစ်တွင် ညီဖြစ်သူဆယ်တန်းအောင်၍ ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် မိခင်ဖြစ်သူမှာထောက်ပံ့ရန် ဝန်ပိနေမည်စိုး၍ မိမိကိုယ်ကျိုးကို အနစ်နာခံပြီး တက္ကသိုလ် ကျောင်းမှထွက်ခဲ့ရရှာသည်။ တက္ကသိုလ်မှထွက်ပြီး ပန်းတနော်မြို့ အထက်တန်း ကျောင်း ကျောင်းဆရာလုပ်ရင်း ဂန္တလောက မဂ္ဂဇင်း၊ တိုးတက်ရေးမဂ္ဂဇင်း စသည်တို့၌ ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးများရေးခဲ့သည်။ ဦးသန့်သည်အခြေအနေအရ ကျောင်းဆရာ လုပ်နေသော်လည်း သူအဖြစ်ချင်ဆုံး အလုပ်မှာ သတင်းစာဆရာဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ဦးသန့်သည် ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် Anglo-Vernauclar Secondary Teachership ဆရာဖြစ် စာမေးပွဲ၌ ပထမနေရာဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ပန်းတနော်အထက်တန်းကျောင်း၌ ကျောင်းအုပ်ကြီးအထိ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီက ဦးသန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြဌာန်းစာအုပ်ကော်မတီနှင့် အမျိုးသား ပညာရေးကောင်စီ၌ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာများအသင်း၏ အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဦးသန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် လအနည်းငယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြန်ရာက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းအုပ်အဖြစ် (၄)နှစ်ကြာ ထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီး ဂျပန်ခေတ်တလျှောက်လုံး ပန်းတနော်မြို့၌နေထိုင်၍ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများကို တိတ်တဆိတ်ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
စစ်ပြီး၍ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသောအချိန်တွင် ဦးသန့်၏ အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်း တယောက် ဖြစ်သူ ဦးနုသည် ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေရာ ဦးသန့်ကို အစိုးရအမှုထမ်းလုပ်ရန် တိုက်တွန်း လေသည်။ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေရန် ရန်ကုန်မြို့သို့ တက်လာသောဦးသန့်မှာ ဦးနု၏ တိုက်တွန်းချက်ကို မဖြစ်မနေ လက်ခံရတော့သည်။
သို့ဖြင့် ဦးသန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ သတင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ပေးခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်အသံလွှင့်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးနောက် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဦးသန့်သည်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၌ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ဦးသန့်အား မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ထပ်မံတာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
သို့ကလို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုသည် ဦးသန့်အား အဆင့်မြင့်တာဝန်အမျိုးမျိုးခန့်အပ်လုပ်ကိုင်စေပြီးနောက် နောက်ဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအတွင်းဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့လေသည်။ နိုင်ငံတော်အဆင့်မြင့်တာဝန်အမျိုးမျိုး လုပ်ကိုင် နေစဉ်အတွင်း ဦးသန့်သည် ‘ပြည်တော်သာခရီး’စာအုပ်ကိုအတွဲ ၂ တွဲခွဲ၍ပြုစုခဲ့သည်။ထို့ပြင် မြို့ပြပုံပြင်များ စာအုပ်နှင့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဆောင်းပါးများကို စာနယ်ဇင်များ၌ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ဦးသန့်အားကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ခန့်အပ်တာဝန် ပေးသည်။ သို့ကလို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၁၉၅၇ မှ ၁၉၆၁အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂ၏ ယာယီအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။ ထိုကာလတွင် ဦးသန့်သည် အထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ဦးသန့်သည် ၁၄ ကြိမ် မြောက် ကုလညီလာခံ၌ ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြန်သည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဦးသန့်သည်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရင်ကြားစေ့ရေး ကုလသမဂ္ဂကော်မရှင်(UN Congo Conciliation Commission) ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ ငွေရင်းငွေနှီး တည်ဆောက် ရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဦးသန့်၏ သံတမန်သက်တမ်းတလျှောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အကြံပေး အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဦးသန့်သည် ၁၉၆၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှစ၍ ယာယီအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်သူ့အား ကွယ်လွန်သွားသောအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒက်ဟမ္မားရှိုး မပြီးမြောက်ခဲ့သော အလုပ် တာဝန်သက်တမ်းကို ဆက်လက်ခံယူရန်အထွေထွေညီလာခံက လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ တခဲနက်ထောက်ခံမှုဖြင့် ခန့်အပ်လိုက်သည်။ တဖန် အထွေထွေညီလာခံသည် ၁၉၆၂ နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ၌ ဦးသန့်အားအတွင်းရေးမှူးချုပ်နေရာကို ၁၉၆၆ နိုဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းကာလအတွက် ထပ်မံ၍ တခဲနက်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ၂၂၉-၁၉၆၆ ၏တခဲနက်ဆုံးဖြတ်ထောက်ခံချက်အရ အထွေထွေ ညီလာခံက ၁၉၆၆ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် ဦးသန့်အား အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူး ဒုတိယ သက်တမ်းအဖြစ် ထပ်မံခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုရာထူး၏ သက်တမ်းမှာ ၁၉၇၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ နေ့တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။
ဦးသန့်သည် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် စတင်ထမ်းရွက်စဉ် ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းများစွာတွင် ကျူးဘားနိုင်ငံ၌ ရုရှားနျူကလီးယားဒုံးပျံများဖြန့်ကျက်ချထားမှု နိုင်ငံအရေးအခင်းများကြောင့် အမေရိကန်နှင့် ဆိုဗီယက်တို့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၌ ရင်ဆိုင်တွေ့ရပြီး တတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်လုဆဲဆဲအခြေအနေမှ ကြားဝင် စေ့စပ်ပေး၍ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးသန့်က တရားဥပဒေစိုးမိုးသော ငြိမ်းချမ်း၍သာယာဝပြောသော
လူ့ဘောင်တရပ်ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် နောက်ထပ်စစ်ပွဲအန္တရာယ် ရှောင်ရှားနိုင်ကြောင်း၊ တရားမျှတသော နိုင်ငံ တကာ ဆပ်ဆံရေးအခြေအနေရှိလျှင် စည်းလုံးညီညွှတ်သောလူသားတရပ်လုံးသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင် သည်ဟု စွဲမြဲစွာယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဦးသန့်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် မိမိ၏အလုပ်တာဝန်ကို ဒုတိယသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးသန့်သည်အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ်မှစ၍ ကျန်းမာရေးတဖြည်းဖြည်းဆိုးဝါးလာကာ အချိန်ကြာမြှင့်စွာ မမာမကျန်း ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၇၄ ခုနိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ခဲ့လေသည်။ ဦးသန့်သည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့(ဒေါက်တာဘွဲ့)မြောက်များစွာကို ရရှိခဲ့သော်လည်း မိမိနာမည်အရှေ့၌ မည်သည့်အခါ မှအသုံးမပြုခဲ့ပေ။
ကုလသမဂ္ဂ တက္ကသိုလ်တွင်ထားရှိမည့် ဦးသန့်ကြေးရုပ်တု ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနား၌ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကွတ်ဝါးလ်ဟိုင်းက အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည် –
“ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ဖွင့်လှစ်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဦးသန့်ရဲ့ ကိုယ်တပိုင်း ကြေးရုပ်တု စိုက်ထူ ထားရှိတာဟာ အလွန်သင့်မြတ်လှပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူသားအချင်းချင်း နာလည်မှုရှိရေးအတွက် ဦးသန့်ရဲ့ မဆုတ် မနစ်သောလုံးလနှင့်ကြိုးပမ်းသွားခဲ့တာကို ကျောင်းသားကျောင်းသူ၊ မိဘများက စိတ်အေးထက်သန် အမှတ်တရရှိနေကြမှာပါပဲ။ ဦးသန့်က ပညာရေးကိုအလွန်အားပေးလိုပြီး စာသင်ကျောင်းရန်ပုံငွေရအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီကျောင်းအတွက် အဘက်ဘက်က မနားမနေ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနားလည်ရေးအတွက် အိန္ဒိယမှ ဂျဝါဟာလာ နေရူးဆုကို ဦးသန့်လက်ခံရရှိစဉ်က ဆုငွေအားလုံးကို ဦးသန့်က ပညာတော်သင်ဆုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဒီကျောင်းအတွက် အားလုံးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်ကျောင်းဆင်းပွဲရောက်တိုင်း ဦးသန့်ကိုယ်တိုင်ကျောင်းကိုလာရောက်ပြီး ကျောင်းသားများအတွက် အမြဲတစေ သြဝါဒစကားပြောကြားတဲ့အတွက် များစွာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်”ဟူ၍ ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဖို့ဒ်ကလည်း -
“ဦးသန့်သည် မိမိကိုယ်ကျိုးကိုမငဲ့ဘဲ လူသားတို့အကျိုးအတွက် အမြတ်ဆုံးသောတာဝန်ဝတ္တရားတို့ကို ထမ်းဆောင် သွားသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက သာဓကကောင်း ပြခဲ့သည့်အတွက်လည်း ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်လာခဲ့သည်ကိုငြင်းကွယ်၍ မရကြောင်း၊ ဦးသန့် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ကြေကွဲမဆုံး ဖြစ်မိပါကြောင်း” ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာကလည်း -
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးအတွက် အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေတွင် အောင်မြင်မှုရှိပုံကို အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သည့်စိတ်နှင့်ဗုဒွဘာသာ၏ အဆုံးအမကြောင့် ဦးသန့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ တွင် အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ရာထူးလက်ခံစဉ်မှစ၍ အနားယူချိန်အထိ တဆက်တည်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဦးသန့်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ နာတာ ရှည်ရောဂါသည်ကြီးနှင့် တူသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲကြီးကို နာလံထလာအောင် ဦးသန့်က ကုသပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင် ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း”ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့လေသည်။
မည်သို့ဆိုစေ နိုင်ငံအချင်းချင်း ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစေ့စပ်ပေး၍ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲနိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဦးသန့်အား မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ့ပြည်သူတို့က ထာဝရအမှတ်တရ ရှိနေမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်တည်း။
ဦးနု (၁၉ဝ၇ – ၁၉၉၅)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၁
လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသောနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် စာရေးဆရာဦးနုကို ၁၉ဝ၇ခု၊ မေလ ၂၅ ရက်၊ စနေနေ့နံနက် (၈)နာရီ၊ ၃၉ မိနစ်၊ ၁၂ စက္ကန့်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း မြောင်းမြခရိုင် ဝါးခယ်မမြို့၌ အဖဦးစံထွန်း၊ အမိ ဒေါ်စောခင်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်းနှစ်ယောက်တွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ညီငယ်အမည်မှာမောင်ဥဖြစ်သည်။
၁၉၁၄ခုနှစ်တွင် ဝါးခယ်မမြို့အစိုးရအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာ စာသင်ကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှပဉ္စမတန်းအထိ ပညာဆည်းပူးသင်ကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ မောင်နုသည် သပိတ်ထဲ၌ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကမောင်နုသည် အသက် ၁၃ နှစ်ရှိပြီး (၇)တန်းကျောင်းသားဖြစ်သည်။ သပိတ်ကြီးပြီးသွားပြီးနောက် အမျိုးသားပညာရေးစနစ်နှင့်အမျိုးသားကျောင်းများပေါ်ပေါက်လာသောအခါ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ဖွင့် လှစ်ခဲ့သော အစိုးရကျောင်းသို့ ပြန်မတက်တော့ဘဲ ဝါးခယ်မမြို့ဘုးရားတဆောင်များ၌ ပထမဆုံးအစိုးအထောက်အပံ့မယူဘဲ ဖွင့်လှစ်သော အမျိုးသားကျောင်းသို့ တက်ရောက်ပြီး ဆဋ္ဌမတန်းမှစ၍ ပညာဆက်လက်သင်ကြားဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဆဋ္ဌမတန်း၌ ပညာသင်ကြားနေစဉ် ဝါးခယ်မအမျိုးသားကျောင်းတွင်ဆရာအခက်အခဲရှိနေ၍ ဆရာတဖက်၊ကျောင်းသားတဖက် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
၁၉၂၄ ခုတွင် မြို့မအထက်တန်းကျောင်းမှ (၁ဝ)တန်းအောင်မြင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်လက်ပညာသင်ကြား ခဲ့သည်။ ၁၉၂၅ တွင် အိုင်အေအထက်တန်းကို နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်၍ အထက်တန်းသို့တက်ခဲ့သည်။
၁၉၂၉ ခုမတ်လတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂလိပ်စား၊ မြန်မာစာ၊ ဒဿနဗေဒဘာသာတွဲဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A) ရရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်များအစည်းအရုံး တည်ထောင်ရာတွင် ကမကထလုပ်၍ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ဦးသန့် (နောင်ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်လာသူ)၏ တိုက်တွန်းချက်အရ ပန်းတနော်မြို့ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ်တာဝန်ယူထမ်းရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်တွင်မောင်နုသည် တက္ကသိုလ်သို့ပြန်သွား၍ ဘီအယ်လ်ဥပဒေတန်းတက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေသင်တန်းမပြီး ဆုံးမီ သုံးခွမြို့အမျိုးသားကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ကျောင်းအုပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ပန်းတနော်မြို့ အမျိုးသားကျောင်းကော်မတီဥက္ကဌ ဦးအောင်ငြိမ်း၊ ဒေါ်ညီမတို့၏ တတိယသမီးမမြရီနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ကျ ပြီးနောက် ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် သုံးခွအမျိုးသားကျောင်းမှ ပန်းတနော် အမျိုးသားကျောင်းသို့ ပြန်လည်၍ ကျောင်းအုပ် အဖြစ်ထမ်းရွက်သည်။ ၁၉၃၄ ခု ကျောင်းပြန်ဖွင့်သောအခါ မောင်နုသည် ကျောင်းအုပ်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်၍ ဘီအယ်လ်ခေါ် ဥပဒေတန်းတက်ရန်အတွက်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဥပဒေတန်းတက် ရောက်နေစဉ် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။ ထို့နောက် ၁၉၃၅ ခုတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်း သားသမဂ္ဂဥက္ကဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ဘီအယ်လ်(ဥပဒေဝိဇ္ဇာဘွဲ့)ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၃၆ ခုဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ဒုတိယတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ် ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ဦးဆောင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ကိုနုသည် ကျွန်ပညာကို အလိုမရှိဟူသောသဘောဖြင့်ဘီအေ(BA)ဘွဲ့ကိုပြန်အပ်ခဲ့သည်။
၁၉၃၇ တွင်ကိုနုသည် သတင်းစာဆရာဦးဘခိုင်၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတို့ ဖွဲ့စည်းထားသော ဖေဘီယံနိုင်ငံရေးပါတီတွင် ဝင် ရောက်ကူညီသည်။ ထို့နောက်တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ ကိုနု အမည် မှ သခင်နုဖြစ်လာသည်။ ထိုနှစ် ၁၉၃၇ မှပင် သခင်နုနှင့်တိုးတက်သော နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိသည့်လူငယ်များစုပေါင်း၍ အင်္ဂလန်ပြည်ရှိ လက်ဝဲစာအုပ်ကလပ်ကို အတု ယူကာ ၁၉၃၇ ခု၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို ဦးစီး ထုတ်ဝေလျှက်ရှိသော “ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်”တွင်လည်းကမ္ဘာကျော် ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်များကို ၁၉၃၆ မှ ၁၉၃၈ ထိအခန်း ဆက်ရေးသားနေခဲ့သည်။ နောင်တွင်အဆိုပါပြဇာတ်များကိုစုပေါင်း၍ ၁၉၅၃ ခုမတ်လတွင် “ကမ္ဘာကျော်ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ် များ”အမည်ဖြင့် စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၃၉ တွင် သခင်နုသည် တရုတ်ပြည်သို့ ချစ်ကြည်ရေးသွားသောအဖွဲ့( Goodwill Mission)တွင် အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
၁၉၄၁ ခုတွင် ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ် သယာဝတီညီလာခံတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးအဆို တင် သွင်းမှုနှင့် ဂျူဗလီဟောတွင် အစိုးရအကြည်အညိုပျက်စေရန်တရားဟောမှုကြောင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရကသခင်နုအား ဖမ်းဆီး၍ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီး ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၄၃ ခု၊ သြဂုတ်လ(၁)၊ ဂျပန်ခေတ်ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရအဖွဲ့တွင် နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၄ တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ပြည်သူ့ လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့တွင် ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၄၅ ခု၊ဇန်နဝါရီလ(၂ဝ)ရက်နေ့တွင် ဖဆပလ လူထုညီလာခံမှရွေးချယ်သော ဗဟိုအမှုဆောင်(၁ဝ)ဦးတွင်ပါဝင် သည်။ ထို့နောက်ဖဆပလအဖွဲ့တွင် ဒုတိယ ဥက္ကဌဖြစ်လာသည်။
၁၉၄၇ ခု၊ဇွန်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ဥက္ကဌအဖြစ် တင်မြောက်ခြင်းခံရသည်။ ထိုနှစ်ဇွန်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ၍ ဇုလိုင်လ(၁၂)ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ၁၉၄၇ ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ယာယီအစိုးရအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ(၂၆)ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ဥက္ကဌအဖြစ်မှ နှုတ် ထွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခု၊ သြဂုတ်လ(၂၆)ရက်နေ့တွင် ဘာသာပြန်စာပေအသင်းကြီးတည်ထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခု၊ အောက်တိုဘာ(၁၇)ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်ပြည်၊ လန်ဒန်မြို့၌ နန်းရင်းဝန်ရစ်ချတ်အက်တလီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံယာယီအစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးသခင်နုတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် “နု -အက်တလီ”စာချုပ်ကိုလန်ဒန်မြို့၌ သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခ၊ု ဇန်နဝါရီလ(၃)ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အမည်တင်သွင်းခံရသည်။ ထို့နောက် ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့နံနက် ၄နာရီ ၂ဝ တွင် လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးနောက် လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသောနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
ထိုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဂျပ်ဆင်ကောလိပ်ကျောင်းဝင်းအတွင်း ယာယီအသင်းတိုက်၌ ဘာသာပြန်စာပေ အသင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန်အမှတ်(၃၆၁)၊ ပြည်လမ်းပေါ်ရှိဆိုရန်တိုဗီလာအဆောက်အအုံ(ယခုမြန်မာစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး ဌာန)သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် “စာပေဗိမာန်”ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဘာသာပြန်စာပေအသင်း အုပ်ချုပ်မှုကောင်စီကိုဖွဲ့စည်း၍ ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅)ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးစေတီတော်အနီးတွင် မဟာပါသဏလိုဏ်ဂူတော်ကြီးကို ပန္နက်ရိုက်အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။
၁၉၅၄ ခုမေလ(၁၇)ရက်နေ့တွင် ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မြို့ရေကူးရပ်သီရိမင်္ဂလာကုန်းမြေရှိ မဟာ ပါသဏလိုဏ်ဂူတော်ကြီးတွင် ကျင်းပရာဥပသကာအဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၅၆ ခု၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှ ခေတ္တနှုတ်ထွက်သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ပါလီမန်အမတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသည်။
၁၉၅၇ ခုတွင် ဇနီးဒေါ်မြရီ၊ ဦးသန့်၊ ဗိုလ်မှူးလွင်၊ ဗိုလ်မှူးပြည်စိုးတို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာတပတ်ချစ်ကြည်ရေးခရီးလှည့်လည် ခဲ့သည်။
၁၉၅၈ ခုဇွန်လ(၉)ရက်နေ့တွင် သန့်ရှင်းဖဆပလအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အောက်တိုဘာလ(၂၈)ရက် နေ့တွင် အိမ်စောင့်အစိုးရသို့ အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ပါလီမန်အမတ်အဖြစ်ထပ်မံရွေးချယ်ခံရသည်။ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သန့်ရှင်းဖဆပလအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုပါတီ(ပထစ)အဖြစ်အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး ပါတီဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ သည်။ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီး၊ တာဝန်များကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၆ဝ ပြည့်၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ကိစ္စကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
၁၉၆၁ ခု၊မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပါတီဥက္ကဌမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆ဝပြည့်နှစ်မှ ၁၉၆၂ မတ်လ ၂ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပထစပါတီဝင်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ မတ်လ ၂ ရက် နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းဦးဆောင်သော စစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းခြင်းခံရပြီးနောက် ၁၉၆၂ မှ ၆၆ ခုနှစ်အထိ ခေတ္တထိန်းသိမ်းခြင်းခံရသည်။ လွတ်မြောက်လာသောအခါ ရဟန်းဝတ်ပြီးမြန်မာပြည်အနှံ ဗုဒ္ဓွဘာသာတရားတော်များဟောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုတွင် မိသားစုနှင့်အတူ အိန္ဒိယသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၆၉ ခုသြဂုတ် ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီပါတီ (PDP)ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းကာ ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဦးနုသည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီမှ ၁၉၇၂ တွင်နှုတ်ထွက်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ပြောင်းရွှေ့ခိုလှုံခဲ့သည်။ ၁၉၈ဝ တွင် စစ်အစိုးရက အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့် ၂/၈ဝ ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သောအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအတွင်း ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဦးနုသည်နာယကအဖြစ် အမှူးပြုပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့(ဒီ/ငြိမ်း)ကို ထူထောင်ဖွဲ့စည်းခဲံသည်။ ယင်းနောက် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၉ တွင် ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျနော်သာလျှင် တရားဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ စင်ပြိုင်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်အပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဦးနု၏ ဒီငြိမ်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ကြီးအဖြစ်ပါဝင်သူများ အများအပြားနှုတ်ထွက်သွားကြသည်။
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အာဏာသိမ်း နဝတ အစိုးရ တက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခွင့် ပြုလိုပ်ချိန်တွင် ဦးနုနာယကပြု ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဒီငြိမ်းပါတီသည် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဦးနုသည် သူဖွဲ့စည်းကြေငြာခဲ့သည့် စင်ပြိုင်အစိုးရအဖွဲ့ကို နဝတ တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်၍ ဖျက်သိမ်းခြင်း မပြုပဲ ခေါင်းမာမာ ဆက်လက်ဆုတ်ကိုင်ရပ်တည်ပြခဲ့သည်။
ဦးနုသည် စာရေးဆရာလည်းဖြစ်ရာ ပထမဆုံးပုံနှိပ်စာမူဖြစ်သည့် “အချစ်လော အမုန်းလော”ပြဇာတ်ကိုဓူဝံမဂ္ဂဇင်း တွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခြင်းခံရသည်။
၁၉၃၆ ခု၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ပြီးသောအခါ “သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား”အမည်ဖြင့်ဇာတ်ညွှန်းရေး၍ ဗြိတိသျှဘားမားရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီက ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် “ဒီးဒုတ်”ဂျာနယ်၌ “ကမ္ဘာကျော်ရှိတ်စပီးယား ပြဇာတ်”များကိုရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၃၇ ခုတွင်ပြဇာတ်တိုများထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာများကိုရွေးချယ်၍ “ခေတ်မှီပြဇာတ်တိုများ”အမည်ပေး၍ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဦးနု၏ ထင်ရှားခဲသည့်စာအုပ်များမှာ “ဗမာ့သတ္တိ”၊ “လူပေါ်လူဇော်လုပ်နည်း”(ပ၊ ဒုတွဲ)၊ (နောင်တွင်အဆိုပါ စာအုပ်ကို ‘မိတ္တဗလဋီကာ’ အမည်သစ်သို့ပြောင်း၍ ထုတ်ဝေရာ၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ်ပညာရေးဌာနမှ ကျောင်းများတွင် သင်ကြားရန် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းခံရသည်။)
“ရက်စက်ပါပေ့ကွယ်”(အဆိုပါစာအုပ်ကိုအင်းစိန် ထောင်တွင် အကျဉ်းချခံနေရစဉ်က ရေးသားခဲ့သည်။)
“ငါးနှစ်ရာသီဗမာပြည်” (အဆိုပါ စာအုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အမျိုးသားစီမံကိန်းဌာန၊ အတိုင်ပင်ခံအရာရှိကြီး မစ္စတာဂျေအက်ဖ်ဖာနီဗဲလ်နှင့် ဦးခန့်တို့က အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။)
“လူထုအောင်သံပြဇာတ်” (အဆိုပါပြဇာတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာသင်ကျောင်း များ၌ သင်ကြားရန်ပညာရေးဌာနမှပြဋ္ဌာန်းသည်။) အမေရိကန်ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီတခုနှင့်ညှိနှိုင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပညာ ပြန့်ပွားရေးအသင်းမှ ကြီးမှူး၍ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ထိုပြင်အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ပြဇာတ်ဖြစ်လည်း စင်တင်ကပြခဲ့ သည်။)
“ငါးပါးသီလ”(မြတ်စွာဘုရား၊ သံဃာတော်၊ ဓမ္မအကြောင်း)၊
“ရုပ်စုံအခြေခံသမိုင်းအတွဲ(၁)”၊ (ကမ္ဘာနှင့်သတ္တဝါအစ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစ)၊
“တြိရတနာ သဗ္ဗဇေယျ မင်္ဂလာဂါထာတော်များ”၊
“တာတေစနေသား”(နယူးဒေလီမြို့ ဧရာဝတီစာပေတိုက်မှ ၁၉၉၁ နိုဝင်ဘာလတွင်ထုတ်ဝေသည်။)
“မြတ်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူ”(ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား) တို့ ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသောစာအုပ်များမှာ –
“Towards Peace & Democracy”,
“From Peace to Stability”,
“The People win through”,
“Burma Looks Ahead”,
Burma under the Japan”,
“Picture and Portraits”,
Forward with the People”,
We Must Defent Democracy”,
“Wages of Sin စသည်တို့ဖြစ် သည်။
ဦးနုရေးသားခဲ့သော ဘဝတဏှာ၊ သမုဒ္ဒယတဏှာ၊ “ကမ္ဘာတစ်ပတ်” စာအုပ်တို့မှာယနေ့တိုင် မထုတ်ဝေရသေးချေ။
ထိုနောက် ၁၉၉၅ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့နံနက်(၁၁)နာရီ(၂၅) မိနစ်တွင် ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာပဓါန သာသနာ့ ဒါယကာကြီး နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်(ငြိမ်း)၊ စာရေးဆရာကြီးဦးနုသည် အသက် (၈၈)နှစ်အရွယ်တွင်(၉၆)ပါးရောဂါဖြင့် အမှတ် (၄၂)ပြည်ထောင်စုလမ်းသွယ် ဆရာစံလမ်းမကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သမီး ဒေါ်စန်းစန်းနု(ဦးသက်တင်)၊ ဦးအောင်ရဲမြင့်။ ဒေါ်မြမြအေး၊ ဦးသောင်းထိုက်၊ ဒေါက်တာမေသဇင်သန်းထိုက်၊ ဦးအောင်၊ ဒေါ်စန်းစန်းနွဲ့၊ ဦးအောင်ငြိမ်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းနု၊ ဒေါက်တာခင်အေးသက်တင်(ခ)ဒေါ်ခင်အေးနုတို့ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဇနီး ဒေါ်မြရီသည် ဦးနုမကွယ်လွန်မီ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်(၁၉၉၃ ခု၊ဖေဖော်ဝါရီလ(၇)ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်သည်။)
ဦးနု၏ ကြွင်းကျန်သောရုပ်ကလာပ်ကို ကြံတောသုဿန်၌ ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်ခဲ့သည်။ ၃ဝ/၁၂/ ၉၆ ရက်နေ့တွင် ကြံတော သုဿန်ဖျက်သိမ်းလိုက်သောကြောင့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ရေဝေးသုဿန်သို့ ဇနီးဖြစ်သူရုပ်ကလာပ်နှင့်အတူ ပြောင်းရွှေ့ ဂူသွင်းထားခဲ့သည်။
(1) Live your life from your heart. Share from your heart. And your story will touch and heal people’s souls. Melody Beattie
(2) Beauty is not in the face; beauty isalight in the heart. Kahlil Gibran
(3) There is nothing to winning, really. That is, if you happen to be blessed withakeen eye, an agile mind and no scruples whatsoever. Alfred Hitchcock
(4) Sometimes, not talking about the problem is the best way to solve it.
(5) Time is the most precious element of human existence. The successful person knows how to put energy into time and how to draw success from time. Denis Waitly
(6) Time is equal to life; therefore, waste your time and waste your life, or master your time and master your life. Alan Lakein
(7) Know the true value of time; snatch, seize, and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination; never put off till tomorrow what you can do today. Chesterfield
(8) Take good care of time, how you spend it, for nothing is more precious than time. In one little moment, short as it is, heaven may be won or lost. The Cloud of Unknowing
(9) If the hair has become white,aman does not on that account become old; thaoughaman may be young, if he is learned the gods look upon him as old. Laws of Manu 2. 136
(10) To know how to grow old is the master work of wisdom, and one of the most difficult chapters in the great art or of living. Henri F Amiel
(11) Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one. Malcolm Forbes
(12) The self is not something that one finds. It’s something one creates. Thomas Szasz
(13) The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. C Rogers
(14) A goal withoutaplan is justawish.
(15) Education costs money, but then so does ignorance. Sir Claus Moser
(16) Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.
(17) Fear and worry desappear when ignorance is dispelled by knowledge.
(18) Many people believe that religion has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started on the earth and reached heaven.
(19) The person who makesasuccess of living is the one who sees his goal steadily and aims for it unswervingly. That is dedication. Cecil B. Demille
(20) Humanity is never so beautiful as when praying for forgiveness, or else forgiving another. Jean Paul
(21) The best deed ofagreat man is to forgive and forget. Nahjul Balagha
(22) Forgiveness of otheres isagift to yourself. Larry Miller
(23) I can be all that I can imagine.
(24) Knowledge is probably the only form of exchange in this world which hasamultiplier effect on both the giver and the taker, where both benefit.
(25) Tomorrow belongs to those who prepare for it today. Malcolm X
(26) The strongest principle of growth lies in the human choice. George Moore
(27) Sail away from the safe harbour….Explore. Dream. Discover. Mark Twain
(28) Education is the best provision for old age.
(29) It is always the start that requires the greatst effort. James Cash Penney
(30) Formal education will make youaliving; self education will make youafortune.
(31) The self is not something that one finds. It’s something one creates. Thomas Sxasz
(32) The Hollow Men
Headpiece of filled with straw
T.S Eliot (1888-1965) written in 1925
(33) Marriage is neither heaven nor hell; it is simply purgatory. Abraham Lincoln
(34) A poor man who marriesawealthy woman getsaruler and notawife.
(35) Women are never stronger than when they arm themeslves with their weaknesses. Madame du Deffand
(36) Women fall in love through their ears and men through their eyes. Woodrow Wyatt
(37) If you want your wife to listen to you, talk to another woman.
(38) An archaeologist is the best husbandawoman can have. The older she gets, the more interested he is in her. Agatha Christie
(39) A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. John C Maxwell
(40) In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men. Cicero
(41) In reality ‘learning’ and ‘change’ are synonymous. Unknown
(42) Learning isatreasure.
(43) If you do not know how to ask the right question, you discover nothing.
(44) If you are not happy as you are, where you are, you will never be happy. Swami Rama Tirtha
(45) Man did not weave the web of life, he is merelyastrand in it. Whatever he does to the web, he does to himself.
(46) We are earth people onaspiritual journey to the stars. Our quest, our earth walk, is to look within, to know who we are, to see that we are connected to all things, that there is no separation, only in the mind. Lakota Seer
(47) There is only one journey; going inside you. Rainer M Rilke
(48) Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most challenging. Joseph Campbell
(49) Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, you can achieve. Mary Kay Ash
(50)The most important thing is God’s blessing and if you believe in God and you believe in yourself, you have nothing to worry about. Mohamed Al-Fayed
(51) Business opportunities are like buses; there’s always another one coming. Richard Branson
(52) Man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot doacertain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary….. if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning. MK Gandhi
(53) The time early in the morning, one andahalf hours before sunrise, called brahma muhurta, is ideal for spiritual activities. Bhagavata Purana
(54) Get up early. I dare you to do it forafew weeks. Your life is too preciousathing to waste. You know that you can be bigger than you currently are. So join The5O’clock Club. Win the Battle of the Bed. Put mind over mattress. Get up early. And as Benjamin Franklin once noted.“There will be plenty of time to sleep when you are dead.” Robin Sharma
(55) Woke up, fell out of bed Draggedacomb across my head Found my way downstairs and drankacup And looking up, I noticed I was late Found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat. John Lennon, ‘A Day in the life’
(56) People are like stained-glass windows. They sparkle and shine when the sun is out, but when the darkness sets in their true beauty is revealed only if there is light from within. Elisabeth Kubler-Ross
(57) It is not the mountain we conquer but ourselves. Edmund Hillary
(58) Our remedies oft in ourselves do lie which we ascribe to heaven. William Shakespeare
(59) Be content to seem what you really are. Marcus Aurelius
(60) Self-knowledge is the shortest road to the knowledge of God. When Ali asked Mohammad, ‘what am I to do that may not waste my time?’, the Prophet answered, ‘Learn to know thyself.’ Aziz ibn Muhammad al-Nasaft
(61) All that we are is the result of what we have thought. The buddha
(62) He who knows others is wise; he who knows himself is enlightened. Tao Te Ching
(63) Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. Henry Ford
(64) If you meditate in the right manner, then the current of mind induced will continue to flow even in the midst of your work. It is as though there were two ways of expressing the same idea; the same line that you take in meditation will be expressed in your activities. Ramana Maharshi
(65) meditation and Action; He who knows these two together/ Through action leaves death behind/ And through meditation gains immortality. Upanishads
(66) The ending of sorrow is the beginning of wisdom. Knowledge is always within the shadow of ignorance. Meditation is freedom from thought andamovement in the ecstasy of truth. Meditation is explosion of intelligence. Jiddu Krisnamurati
(67) There is no meditation without wisdom, and there is no wisdom without meditation. Whenaman has both meditation and wisdom, he is indeed close to nirvana.
(68) In life, as in football, you won’t go far unless you know where the goalposts are. Arnold Glasgow
(69) The game of life isalot like football. You have to tackle your problems, block your fears, and score your points when you get the opportunity. Lewis Grizzard
(70) The goal of life is living in agreement with nature. Zeno
(71) The mind, which is not material, is related to insight(non-visual perception), compassion, and the profound intelligence- which is the real goal of life- and therefore of education. Obviously one needsabrain that functions well(like one needsaheart oraliver that functions well)but the real source of acting rightly, ofareligious life is the mind. Jiddu Krishnamurti
(72) If success is your destination, Respondez is the path.
(73) “It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you’ll drift in that direction. Warren Buffett
(74) Knowledge is power.
(75) A teacher is one who makes himself progressively unnecessary. Thomas Carruthers
(76) Sustainability is here to stay or we may not be. Niall Fitzgerald
(77) Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Albert Einstein
(78) College is likeafountain of knowledge- and the students are there to drink.
(79) Education is the best provision for old age. Aristotle
(80) Formal education will make youaliving; self-education will make youafortune.
(81) Experience isagood school, but the fees are high. Heinrich Heine
(82) Experience isahard teacher because she gives the test first, the lesson afterward. Vernon Law
(83) learning is what most adults will do foraliving in the 21st century. Perelman
(84) Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one. Malcolm Forbes
(85) Education isaprogressive discovery of our own ignorance. Will Durant
(86) Education costs money but then so does ignorance. Sir Claus Moser
(87) Sail away from the safe harbour…..Explore. Dream. Discover. Mark Twain
(88) Todayareader, tomorrowaleader. Margaret Fuller
(89) whether you believe you can doathing or not, you are right. Henry Ford
(90) There are always difficultculties arising that tempt you to believe your critics are right. Ralph W Emerson
(91) How will you know the difficulties of being human, if you are always flying off to blue perfection? Where will you plant your grief seeds? Workers need ground to scrape and hoe, not the sky of unspecified desire. Jalaluddin Rumi
(92) No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that’s our real disaster. The Dalai Lama XIV
(93) He who nurtures benevolence for all creatures and in his heart overcomes all difficulties will receive riches at every step. Chankya Niti
(94) Spiritual evolution occurs as the result of removing obstacles and not actually acquiring anything new. Devotion enables surrender of the mind’s vanities and eherished illusions so that it progressively becomes free and more open to the light of Truth. David Hawkins
(95) Devotion must not be like the flood of the rainy season in which all get washed away. Devotion should be like the river that retains water even in the hottest season. Kabir
(96) Life is alwaysapolarity. If there were no darkness there would be no light…..if the sun always shone you would not appreciate it. Silver Birch
(97) Within light there is darkness, but do not try to understand that darkness. Within darkness there is light, but do not look for that light. Light and darkness isapair, like the foot before and the foot behind in walking. Shih,tuo
(98) Faith isabird that feels dawn breaking and sings while it is still dark. Rabindranath Tagore
(99) just be alone, sit silently, and look into the darkness. Become one with the dark, disappear into it. Look at the stars-feel the distance, the silence, the emptiness, and use night for your meditation. Sitting in bed doing nothing….just feeling. Many are completely unaware of the beauties of the night… it is the right time for meditation.Osho
(100) passion- to keep going further. Hope, foranew morning , everyday. Will, to keep crossing milestones. Strength, to set new records. Power, to set new benchmarks. Spirit, to touch new skies. Intention, to change the times. Inspiration, to go beyond ourselves.
(101) If you have integrity, nothing else matters. If you don’t have integrity, nothing else matters. Alan K. Simpson
(102) The only thing that stands betweenaperson and what they want from life is often the will to try it and the faith to believe it’s possible. Rich De Vos
(103) Defining success is no easy task. It isavery personal thing. But there are many traits that those we consider successful seem to share. And that’s what this little movie is all about…..
(104) Nothing succeeds like success. Old saying
(105) I cannot think of any need in childhood as strong as the need forafather’s protection. Sigmund Freud
(106) Animation can explain whatever the mind of man can conceive. Walt Disney
(107) Music is what life sounds like. Eric Olson
(108) Stay on top of your finances. Don’t leave that up to others. Leif Garrett
(109) Fashions fade, style is eternal. YSl
(110) Teach best what you most need to learn. Richard David Bach
(111) Teachers open the door but you must enter by yourself. Chinese Proverb
(112) Nothing gold can stay. Robert Frost
(113) Education is the transmission of civilization. Will Durant.
(114) You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. Kahlil Gibran.
(115) He who gives liberally goes straight to the gods; on the high ridge of heaven he stands exalted. Rig Veda
(116) Give, and it will be give to you….for the measure you give will be the measure you get back. Bible 6.38
(117) Give not with the thought to gain, and be patient unto they lord. Quran 74. 6-7
(118)Giving simply because it is right to give, without thought of return, ataproper time, in proper circumstances, and toaworthy person, is enlightened giving, Giving with regrets or in the expectation of receiving some favour or of getting something in return, is selfish giving. Bhagavad Gita 17.20-21
(119) You must be the change you wish to see in the world. MK Gandhi
(120) Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Leo Tolstory.
(121) We can change the world, but not improve it, if we do not have peace. Sri chinmoy
(122) Since you alone are responsible for your thoughts, only you can change them. You will want to change them when you realize that each thought creates according to its own nature. Paramahansa yogananda
(123) I had always been the one to decide what’s best for me, and who and what could make me happy. It’s really frustrating and full let Him make me feel how much I am loved. I will let Him surprise me and show me the things I have never known before. Itakeoffthemask, com
(124) I always prefer to believe the best of everybody, it saves so much trouble. Rudyard Kipling
(125) Make itapractice to judge persons and things in the most favourable light at all times and under all circumstances. Saint Vincent de Paul
(126) A bit of fragrance always clings to the hand that gives roses. Chinese Proverb
(127) Along with education, which generally deals only with academic accomplishments, we need to develop more altruism andasense of caring and responsibility for others. The XIV Dalia Lama
(128) Still waters run no mills. Anonymous
(129) Nature provides exceptions to every every rule. Margaret Fuller
(130) When the soil disappears, the soul disappears. Ymber Delecto
(131) Waste isatax on the whole people. Albert Atwood
(132) Energy conservation is the foundation of energy independence. Tom Allen
(133) Nature providesafree lunch, but only if we control our appetites. William R
(134) Education should commence at birth.
(135) Modern technology owes ecology an apology. Alan M Eddison
(136) Man is child of his environment.
(137) Smile don’t frown. Look up, don’t look down. Believe in your self don’t let yourself go. Just be who you are and let your life flow. Kirstie Alley
(138) Man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot doacertain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning. MK Gandhi
(139) It isn’t true that everyone should follow one path. Listen to your own truth. Ram Dass
(140) we are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be we have the power to make ourselves. You cannot believe in God until you believe in yourself. Swami Vivekananda
(141) For tomorrow belongs to the people who prepare for it today. African Proverb
(142) Fear nothing else, but try to fear fear……Remember, no matter what your tests are, you are not too weak to fight. God will not suffer you to be tempted more than you are able to bear. Paramahansa Yogananda
(143) Do not take this material world so seriously because it is always changing. Something terrible that you take so seriously today is going to change tomorrow. Radhanath Swami
(144) Parents bring their experience to the table, students their personality and counselors the knowledge to weave it all together.
(145) Chooseajob you love and you will never have to workaday in your life. Confucius
(146) Everything goes in cycles, toadegree. Herb Brooks
(147) Education should commence at birth and cease only at death. Albert Einstein
(148) Education is the movement from darkness to light. Allan Bloom
(149) You teach best what you need to learn most. Richard David Bach
(150) Leadership and learning are indispensable to each other. John F. Kennedy
(151) A book is likeagarden carried in the pocket. Chinese Proverb
(152) Nothing that is worth knowing can be taught. Oscar Wilde
(153) A ship is safe in harbour, but that’s not what ships are for. William Shedd
(154) Books are lighthouses erected in the great sea of time.
(155) Short filmmaking can beafine art. Terri Windling
(156) Offense is the essence of air power. General H H Arnold
(157)Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Henry Ford
(158)History is onlyavalue of relation.
(159) Artificial Intelligence is whatever hasn’t been done yet. Larry Tesler
(160) You never getasecond chance to makeafirst impression.
(161) If I’d had some set idea ofafinish line, don’t you think I would have crossed it years ago? Bill Gate
(162) compassion literally means to feel with, to suffer with. Everyone is capable of compassion, and yet everyone tends to avoid it because it’s uncomfortable. And the avoidance produces psychic numbing-resis-tance to experiencing our pain for the world and other beings. Joanna Macy
(163) Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival. Tenzin Gyatso, the XIVth Dalai Lama
(164) If ye realize the Voidness, Compassion will arise within your hearts; If ye lose all differentiation between yourselves and others, fit to serve others ye will be; And when in serving others ye shall win success, then shall ye meet with me; And finding me, ye shall attain Buddhahood. Milarepa
(165) He who regards the world as he does the fortune of his own body can govern the world. He who loves the world as he does his own body can be entrusted with the world. Tao Te Ching
(166) The wife is not the husband’s bond-slave but his companion and equal partner in all his joys and sorrows, and is as free as the husband to choose her own path. MK Gandhi
(167) In Vedic times, women taught the highest truths and received the same veneration as men….Women must not be discouraged from finding their own solutions to their own solutions to their problems. Swami Vivekananda
(168) Is God man or woman? The answer to this question is neither- God is That. But if you must give Godagender, God is more female than ale, for he is contained in She. Mata Amritanandamayi
(169) Men and women are protecting friends one of another; they enjoin the right and forbid the wrong, and they establish worship and they pay the poor-due, and they obey Allah and His messager. Quran 9-71
(170) Knowledge is power. Anonymous
(171) Facts do not cease to exist because they are ignored. Aldous Huxley
(172)Always walk through life as if you have something new to learn and you all.
(173) It’s what you learn after you know it all that count. Harry Truman
(174) The more we study, the more we discover our ignorance. Percy Bysshe Shelley
(175) You teach best what you most need to learn. Richard David Bach
(176) The future depends on what we do in the present. Mahatma Gandhi
(177) Education isaprogressive discover of our own ignorance. Will Durant
(178) In spiritual life there is no room for compromise. Awakening is not negotiable; we cannot bargain to hold on to things that please us while relinquishing things that do not matter to us. A lukewarm yearning for awakening is not enough to sustain us through the difficulties lnvolved in letting go. It is important to understand that anything that can be lost was never truly ours, anything that we deeply cling to only imprisons us. Jack kornfield
(179) As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Nelson Mandela
(180) All the world is liberated, O Nanak, by embarking upon the Boat of Truth. Guru Nanak
(181) A man only learns in two ways-by reading and by association with smarter people.
(182) Education is learning what you didn’t even know you didn’t know. Daniel J. Boorstin
(183) It is all about the strategy. Michael Schumacher
(184) Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back. Chinese proverb
(185) Harmony with nature will bring youahappiness known to few city dwellers. In the company of other truth seekers it will be easier for you to meditate and think of God. Paramahansa Yogananda
(186) The more we study, the more we discover our ignorance. Percy Bysshe Shelley
(187) Always walk through life as if you have something new to learn and you will. Vernon Howard
(188) Education isabetter safeguard of liberty thanastanding army. Edward Everett
(189) Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Albert Einstein
(190) Nine tenths of education is encouragement. Anatole France
(191) The direction in which education startsaman will determine his future life. plato
(192) The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Sydney J Harris
(193) To the uneducated, the letter A is just three sticks. AA Millne
(194) The important thing is not to stop questioning. Albert Einstein
(195) Love is more eminent than knowledge and greater than intelligence. Hugo of St Victor
(196) Beloved, let us love one another, for love is of God. Everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God. For God is love.
St John, Epistle
(197) Both light and shadow are the dance of love. Love has no cause, it is the astrolabe of God’s secrets. Lover and loving are inseparable and timeless. Although I may try to descrive love, when I experience it, I am speechless. Although I may try to write about love, I am rendered helpess. My pen breaks, and the paper slips away at the ineffable place where lover loving and loved are one. Every moment is made glorious by the light of love. Jalaluddin Rumi
(198) “ Let me not pray to be sheliered from dangers, but to be fearless in facing them.
(199) After climbingagreat hill, one only finds that there are many more hills to climb. Nelson Mandela
(200) Every community, every caste, every linguistic group must be allowed freedom to flourish, prosper and develop, yet they must be woven into one india, toaunified india. Rajiv Gandhi
(201) Argue for your limitations and sure enough, they’re yours. Richard Bach
(202) Genius without education is like silver in the mine. Benjamin Franklin
(203) The secret in education lies in respecting the student. Ralph Emerson
(204) Life has no limitations, except the ones you make. Les Brown
(205) Whether you think you can or think you can’t- you are right. Henry Ford
(206) One person withabelief is equal toaforce of 99 who have only interests. John Stuart Mill
(207) Learning is related to the buddhi, intellect. It is not mere scholarship. Familiarity with books is not knowledge. One’s entire life isacontinuous process of learning. Any process of inquiry is related to learning. But basically our inquiry should be concerned with finding out what is transient and what is permanent. This is true knowledge. Sri Satya Sai Baba
(208) Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now.
(209) Sail away from the safe harbour….Explore. Dream. Discover. Mark Twain
(210) The creation of beauty is Art. Ralph Waldo Emerson
(211) Spiritual seekers look for self-realisation or enlightenment in the future. Eckhart Tolle
(212) Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity. We need only to be awake, alive in the present moment. Thich Nhat Hanh
(213) As following rivers disappear in the sea, Losing their names and forms, Soawise man, freed from name and form, Attains the divine Purusha, who is greater than the Great. Mudaka Upanishad, Book3Chapter2Sloke 8
(214) Women are lining up to marry me, because I’manice guy, because I’m loaded, because I know how to deal with women. SILVIO BERLUSCONI (Italian prime minister, on why women find him irresistible)
(215) I’m sure we would not have had men on the moon if It had not been for Wells and Verne and the people who write about this…I’m rather proude of the fact that I know several astronauts who became astronauts through reading my books. Artur C Clarke
(216) Literacy is notaluxury, it isaright andaresponsibility. If our world is to meet the challenges of the 21st we must harness the energy and creativity of all our citizens. Bill Clinton
(217) Literacy unlocks the door to learning throughout life, is essential to development and health, and opens the way for democratic participation and active citizenship. Kofi Annan
(218) Education is the manifestation of the perfection already in man. Swami Vivekananda
(219) The end product of education should beafree creative man, who can battle against historical circumstances and adversities of nature. S Radhakrishnan
(210) The question is not whether we will die, but how we will live. The purpose of life is to livealife of purpose. You only live once- but if you work it right, once is enough. Dr. Lekha Adik Pathak and family
(221) A man has three names; the name he inherits, the name his parents give him and the name he makes for himself. Action springs not from thought, but fromareadiness for responsibillity.
(222) The world is butacanvas to the imagination. Henry David Thoreau
(223) Those whom the gods love grow young. Oscar Wilde
(224) Good questions outrank easy answers. Anonymous
(225) We haveahard time forgetting the injuries we have received from others, but an even harder time remembering how much we have injured others.
(226) The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Sydney J Harris
(227) Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one. Malcolm Forbes
(228) Only the deucated are free.
(229) A creator has the right to control the disposition of his or her works. Esther Dyson
(230) Every new beginning comes from some other beginning’s end. Seneca
(231) If you’re looking for growth, we’re looking for you.
(232) Understand that the right to choose your own path isasacred privilege. Use it. Dwell in possibility.Oprah Winfrey
(233) “To get rich is glorious” Deng Xiaoping proclaimed,
(234) Labels are for filing. Labels are for clothing. Labels are not for people.
(235) He loves his country best who strives to make it best.
(236) In the truest sense, freedom cannot be bestowed; it must achieved. Franklin D Roosevelt
(237) God can be realised through all paths. All religions are true. The important thing is to reach the roof. You can reach it by stone stairs or by wooden stairs or by bamboo steps or byarope. You can also climb up byabamboo pole. Ramakrishna
(238) Do not be misled by what you see around you, or be influenced by what you see. You live inaworld which isaplayground of illusion, full of false paths, false values and false ideals. But you are not part of that world. Sai Baba
(239) Parents can only give good advice to children or put them on the right paths, but the final forming ofaperson’s character lies in her own hands. Anne Frank
(240) There are many paths to the top of the mountain, but the view is always the same. Chinese proverb
(241) Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. Mahatma Gandhi
(242) Man is bothacreator and moulder of his environment.
(243) There is pleasure whenasore is scratched, But to be without sores is more pleasurable still. Just so, there are pleasures in wouldly desires, But to be without desires is more pleasurable still. Nagarjuna
(244) The old that is strong does not wither. J R R Tolkien
(245) Action speaks louder than words but not nearly as often. Mark Twain
(246) Sail away form the safe harbour …Explore. Dream. Discover. Mark Twain
(247) Intellectual education is not the acquisition of facts but learning how to make facts live.
(248) I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Socrates
(249) Love is friendship set on fire. Jeremy Taylor
(250) We are ready to sit down with Mr Obama face-to-face and put the global issues on the table, man-to-man, freely, and in front of the media and see whose solutions are better. MAHMOUD AHMADINEJAD, Iranian President, on debating with Barack Obama
Labels: သူတို့ ဆိုစကား
မိသားစု -; ရည်ညွှန်းကိုးကားဖို့ စံ
အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀မှာ ဆက်နွှယ်မှုတွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အဲဒါတွေမှတဆင့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘ၀ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာများနှင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့အသွင်အပြင်များကို နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သဘာဝဆက်နွှယ်မှုက ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးများအတွက် အခွင့်ကောင်းယူ အသုံးချခြင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ ဒါမှမဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်မှုဆိုင်ရာ ရှေးရှုးဦးတည်ရာများမှာ ပုံဖော်တဲ့ တိုးတက်ရင့်သန်လာတဲ့ ဆက်နွှယ်ရေးများနဲ့ပတ်သက်လို့ - သတိထားရပါ့မယ်။
ဥပမာ… သင့်မိသားစုဟာ သင်ရဲ့ ပထမဆုံးသော ရည်ညွှန်းကိုးကားစရာ စံ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သူတို့နှင့် သင့်ရဲ့ နေ့များစွာ ညများစွာကို အသုံးပြု အချိန်ကုန်လွန်စေပါတယ်။ သင်ဟာ သူတို့နှင့် ချိုမြသော - ခါးသက်သော အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပါတယ်။ ဒီအဓိပ္ပါယ်မှာတော့ သင်ရဲ့မိသားစုဟာ သင့်ရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ များစွာအရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင်က သင့်ရဲ့မိသားစုထံမှ လက်ခံရယူတဲ့ သင်ခန်းစာအမျိုးအစားတိုင်းကို အခွင့်ကောင်းယူ အသုံးချ သင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့မိသားစုမှာ အချို့အဖြစ်အပျက်များဟာ လိုချင်ဖွယ်ရာမဟုတ် - ဆိုတဲ့ အရာကို သင် တွေ့ မြင်လျင် သင်ဟာ စာနာနားလည်မှုကို ပြသရပါ့မယ်။ သင့်ရဲ့မိသားစုဟာ အကောင်းဆုံးတစ်ခု မဟုတ်လျင်တောင် မိသားစုဖြစ်နေဆဲဖြစ်တယ် - ဆိုတာကို တန်ဖိုးထားရပါ့မယ်။ အကြောင်းက သင်ဟာ ပြင်ပကမ္ဘာကို ၀င်ပြီး မကျေနပ်ဖွယ်အခြေအနေအမျိုးအစားအားလုံးကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ပက်ပင်းကြုံ ထိတွေ့တဲ့အခါ မိသားစုအပြင်ဘက် အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ဘ၀ကို တွေ့ရှိပါတော့တယ်။
မကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပါ။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေမှ ရှောင်ရှားလို့မရဘူးဆိုတာကို လက်ခံပါ။ သင့်ရဲ့မိသားစုဟာ သင့်ရဲ့မိသားစုမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင့်အတွက် လေ့ကျင့်မှုသင်တန်ရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဓိပ္ပါယ်မှာတော့ သင့်ရဲ့မိသားစုဟာ သင့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကို စတင်တက်လှမ်းရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျောင်းဟာ သင့်အတွက် သမာရိုးကျဖြစ်တဲ့ တရားဝင်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့မိသားစုကတော့ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့ ပညာရေးရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် နှစ်ခုလုံးဟာ အညီအမျှ တန်းတူအရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ သင်ဟာ သင့်မိသားစုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်မှ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို လက်ခံရရှိလျင် - မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ပထမဆုံး လေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတစ်ခုအဖြစ် အဲဒါကို ရယူပါ။ အကြောင်းက တစ်နေ့ သင့်ရဲ့အိမ်မှ အပြင်ကို ထွက်ခွါဖို့ ပြီးတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေထိုင်ဖို့ သင်ဟာ ဦးတည် လျာထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒီနောက် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ သင်ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေ့အကြုံများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တူညီတဲ့အတွေ့အကြုံအမျိုးအစားများကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေထိုင်ဖို့နဲ့ အလိုက်သင့်ပြုမူနေထိုင်ဖို့အလို့ငှါ မိသားစုဘ၀မှာ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေ့အကြုံများကို လက်ခံဖို့နဲ့ သည်းခံဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒီအဓိပ္ပါယ်မှာတော့ သင့်ရဲ့မိသားစုဟာ သင့်အတွက် ကောင်းချီမင်္ဂလာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဟာ ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့လူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အရွယ်ရောက် ရင့်ကျက်လာတဲ့လူတစ်ယောက် အဖြစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲသို့ သင့်ကို ပို့ဆောင်ပါတယ်။
လူတိုင်းက တရားဝင်ပညာရေး သမာရိုးကျဖြစ်တဲ့ပညာရေးဟာ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ တရားဝင်ပညာရေးမရှိဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်အကိုင်ရရှိဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးသော ၀ိုင်းချာပတ်နေတဲ့ ဘ၀ရပ်တည်မှုအရ ပညာရေးဟာ အရာရာတိုင်းရဲ့ အစ အဆုံး အဓိကပဲ အသက်ပဲတော့ မဟုတ်ပါ။ ဘ၀ရဲ့အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးအတွက် တစ်စုံတစ်ခုကို သင်ဟာ ပိုလို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းအတွက် မိသားစုဟာ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ပညာရေးရဲ့ ဗဟိုချက်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်ထဲသို့ ၀င်ခွင့်ရဖို့ သင်ဟာ ၀င်ကြေးရဲ့ဘယ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါ။ ဒါက လူတိုင်းက ကောင်းကောင်းသိတဲ့ အချက် - သဘာဝက , မွေးဖွားခြင်းက ကံဇာတာပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ပညာရေး အလိုအရ သင့်ရဲ့မိသားစုက သင့်ကို လက်ကမ်းတဲ့ လျော့ဈေးဖြင့်ရနိုင်တဲ့ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် အခွင့်ကောင်းယူအသုံးချဖို့ သင်ဟာ ကျိန်းသေအောင် စိတ်ချအောင် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ယူနစ်တစ်ခု ဌာနတစ်ခုအဖြစ် မိသားစုဟာ အသေးစားလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အပြင်ဘက် ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သင့်ကို စွမ်းနိုင်ရန် လေ့ကျင်းပေးတဲ့ မြေပြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိသားစုဘ၀မှာ သာယာကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀ကို နေထိုင်ဖို့ ကျရှုံးတဲ့သူဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်တဲ့ တင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀ကို နေထိုင်ဖို့ ကျရှုံးပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ အလိုက်သင့်ပြုမူနေထိုင်မှု ဘ၀ရဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုဟာ လူမှုရေးဘ၀ကို ချောမောပြေပြစ်စွာ ပြေးလွှားလည် ပတ်နိုင်အောင် မောင်းနှင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ မိသားစုရဲ့အောက်ခံဘောင်အတွင်း အလိုက်သင့်ပြုမူနေထိုင်ဖို့ ပထမဆုံး လေ့လာသင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ လူမှုဘ၀ကို သင် ၀င်ရောက်လျင် - အလိုက်သင့်ပြုမူဖို့ ချက်ချင်းလက်ငင်း လေ့လာသင်ကြားလို့ ဖြစ်စေ, လွယ်ကူတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်လို့ ဖြစ်စေ - ဒါမှမဟုတ် မူမမှန်ဘဲ လိမ်ညာလှည့်ဖြားလို့ဖြစ်စေ, အဲဒီနောက် အချိန်အားလုံးမှာ အပြင်းအထန် မညှာမတာ ဆက်ဆံရေးတင်းမားမှုများ, အားပြိုင်မှုများ, စိတ်ပင်ပန်းမှုများဖြင့် အထိတ်တလန့် အခြေအနေ အနေအထားတစ်ခုမှာ နေထိုင်ရှင်သန်လို့ဖြစ်စေ - သင်ဟာ ရွေးပိုင်ခွင့် နှစ်ခုသာလျင် ရှိပါလိမ့်မယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, April 11, 2011
Vivekananda အဖြစ် ကောင်းစွာထင်ရှားခဲ့တဲ့ Narendra Dutt ဟာ Vedanta ရဲ့ တန်ဖိုးကို ခွဲဝေဖို့နဲ့ ဖြန့်ကြက်ဖို့ - ဖြစ်နိုင်ယင် ဖြစ်နိုင်သလောက် လူအများကို မြင့်မားတဲ့ပညာရေးကို ရောက်ရှိဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ဖို့ Ramakrishna အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
Swami Vivekananda ဟာ ဘာသာတရားမှာ လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေဖို့အတွက် ထပ်မံကြိုးပမ်းပါတယ်။ သူဟာ ဘာသာတရားအချင်းချင်းအကြား ညီညွတ်မှုကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့ ဟောပြောချက်များဟာ အများလက်သင့်ခံတဲ့အခြေအနေမှာ ကြီးမားတဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ ထင်ရှားပါတယ်။ Vivekananda အဖို့ God အတွက် အမှုထမ်းဆောင်ခြင်းဟာ လူမှုရေးပညာရေးစသဖြင့် နောက်ခံအားနည်းသူ ချို့ငဲ့သူများအတွက် အမှုထမ်းခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ သူဟာ- “Daridra Narayana; အနည်းငယ်သောအခွင့်ထူးခံများမှာ God ကို မြင်တွေ့ခြင်း”- ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသစ်တစ်ခုကို ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါကို ဘာသာတရားဆိုင်ရာ အမှန်တရားတစ်ခုအဖြစ် - ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သက်သေထူ ပြစရာတစ်ခုအဖြစ် အတည်ပြုထားပါတယ်။
ဘာသာတရားက အသိညဏ်ဆိုင်ရာ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်များမှာ ဆက်စပ်ဖို့အလို့ငှါ - မြတ်ဗုဒ္ဓကဲ့သို့ Vivekananda ဟာ - လူသားရဲ့အပြုအမူမှာ ဆင်ခြင်တုံးတရာကို အားပေးမြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ကျယ်ဝန်းတဲ့ပရိသတ်တစ်ခုကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပါလိမ့်မယ်။
လူအများကို ခွဲခြမ်းပစ်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် အခွင့်ထူးခံကို မြှင့်တင်ဂုဏ်တင်ချီးကျူးတဲ့ ဘာသာတရား - ကိုယ့်ကျိုးရှာ အမြတ်ထုတ်ခြင်းကို အားပေးအားမြှောက်ပြုတဲ့ - ပြီးတော့ စစ်ပွဲများကို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့ - ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ် မျှတမှု သမာသမတ်ရှိမှု မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်များဟာ - သူယုံကြည်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝ အားပေးထောက်ခံမှုက လူသားရဲ့အသိညဏ်ကို ကျယ်ပြန့်ဖို့ ကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတာ - ဖြစ်ပါတယ်။ Vivekananda အလိုအရ အကျွန်ုပ်တို့မှာ အမုန်းတရားကို စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သနားခြင်းကရုဏာကို စိုက်ပျိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှသာလျင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ညီညွတ်မှုမှာ နေထိုင်ဖို့ စတင်နိုင်ပါတယ်။
တသီးတသန့်နေတဲ့ဘ၀မှာ နေထိုင်ခြင်းဟာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူတွေပိုလို့ပိုလို့ မြို့ပြဧရိယာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင် ကြတဲ့အခါ ခြားနားတဲ့ယုံကြည်မှုများဖြင့်ပြီးတဲ့ လူအများရဲ့ တိုးပွါးလာတဲ့ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ဟာ ဘေးချင်းယှဉ် အတူတကွလက်တွဲလျှက် နေထိုင်ကြရပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရည်မှန်းချက် - ယုံကြည်သက်ဝင်မှုနှင့် လက်ခံထင်မြင်ချက်ကော ကျင့်သုံးမှုပါ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှု လိုအပ်ပါတယ်။
Vivekananda အလိုအရ Vedanta ဟာ ဗြဟ္မဏဟိန္ဒူဘာသာမဟုတ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းအတူ ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းမဟုတ် မူစလင်ဘာသာလည်းမဟုတ်ပါ။ Vedanta ဟာ ဒီအရာအားလုံး ရဲ့ ပေါင်းရုံးဖော်ပြချက်အစုစုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၉၃-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁-ရက်က Chicago မြို့၊ The parliament of Religions - ၌ သူ့ရဲ့ သမိုင်းဝင် မိန့်ခွန်မှာ Swami Vivekananda က အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ -“ ခရစ်ယာန်ဟာ ဟိန္ဒူဘာသာ ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာဖို့မဟုတ်။ ဟိန္ဒူ ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဖြစ်လာဖို့မဟုတ်။ တစ်ခုချင်းဟာ အခြားသူများရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို လက်သင့်ခံဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သည့်အပြင် အသီးသီးအလိုက် မူလအခြေအနေအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ဖြစ်ပြီး လျော်ညီစွာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ ဖြစ်တယ်” ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ramakrishna Paramahansa က “ သဘောထားခံယူချက်များစွာအနေဖြင့် လမ်းခရီးက များစွာပါ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ Swamiji က လူသားရဲ့အရေးကိစ္စမှာ ချဉ်းကပ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ များပြားမှုကို အကြီးအကျယ် တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးအစားများရဲ့ဘယ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် အဆုံးသတ် တူညီမှုနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Vivekananda က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “အားလုံးက ဘာသာတရားတစ်ခု, ကိုးကွယ်ကြည်ညိုလေးစားမှုရဲ့ ယူနီဗာဆယ်ပုံစံတစ်ခု, လူ့ကျင့်ဝတ်စာရိတ္တဆိုင်ရာစံနှုန်းတစ်ခု - မျှသာ သတ်မှတ် လက်ခံဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုလျင် ကြီးမားတဲ့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှခြင်းဟာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အားလုံးသောဘာသာတရားအတွက် ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက် အလဲထိုးပါလိမ့်မယ်။”
Ramakrishna အဖွဲ့အစည်းဟာ အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးရဲ့ စားစရာ, အ၀တ်အထည်, နေစရာအဆောက်အဦး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဂရုတစိုက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ဒါက အသေးစိတ် ခရေစေ့တွင်းကျ လေ့ကျင့်မှုနှင့် အတွေးအမြင် စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒမှတဆင့် အဲဒီရဲ့ ၀န်ထမ်းအမှုထမ်းကို လှုံ့ဆော် တွန်းအားပေးပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားများဟာ သူတို့ရဲ့အ၀၀သောအပြုအမူများကို လျော်ကန်သင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြဖို့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကြော်ငြာဆောင်ပုဒ်ကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရးသမားတစ်ယောက်က အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက် ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မတဲ့လဲ? ဘာသာတရားနဲ့သူက သူဟာ ချို့ငဲ့သူများရဲ့ အလုပ်အကျွေးပြုလုပ်ရာမှာ ယုံကြည်တယ်ဆိုလျင် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်တဲ့ အသေခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို ဘယ်လို ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါ့မလဲ? Swamijiရဲ့ အဖြေကတော့ ဘာသာတရားများအကြား ယုံကြည်မှုနှင့်ညီညွတ်ရေးဆိုင်ရာ အများအပြားကို အားပေးတိုက်တွန်းဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The parliament of Religions မှာ Swami Vivekananda က ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာတရားအတွက် တစ်ခုတည်းခြွင်းချန်အသက်ရှင်သန်ဖို့နှင့် အခြားဘာသာတရားများကို ဖျက်ဆီးဖို့ စိတ်ကူးယဉ်မျော်လင့်အိပ်မက်မက်လျင် - အကျွန်ုပ်! သူ့ကို ကရုဏာသက်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ အတိုက်အခံလုပ် ခုခံကာကွယ်စေကာမူ “ကူညီကြပါ - မတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့။ သဟဇာတဖြစ်ကြပါ - မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့။ ညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းကြပါ - သဘောထား မကွဲလွဲကြပါနဲ့” လို့ ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ နဖူးစည်းစာတန်းအပေါ်မှာ မကြာခင် ရေးထိုးခံရလိမ့်မယ် - ဆိုတာ အကျွန်ုပ်! သူ့ကို ညွှန်းဆိုထောက်ပြပါတယ်။”
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ Swami Vivekananda ရဲ့ 150-နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပတဲ့အခါ ငယ်ရွယ်သူ မျိုးဆက်အားလုံးကိုလည်းပဲ ကိုယ်စားပြု ကျင်းပပေးကြပါစို့……
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, April 06, 2011
သက်ရှိအားလုံးအတွက် စာနာရိုင်းပင်းတတ်မှု ကရုဏာ
အားလုံးသောအယူဝါဒများမှာ ရွေးချယ်ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ အသိညဏ်ပညာ ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီပညာက ပင်ကိုယ် ရှိရင်းစွဲကရုဏာကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အဲဒါတွေက အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နဲ့ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမှုရဲ့ အောင်ပွဲခံဖို့အတွက် ချိန်းဆိုထားပြီး ချိတ်ဆက်မိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အသွေးလက္ခဏာတွဟာ အားလုံးသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်မှာပဲ အချို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒြပ်ရှိတွေဟာ ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့စနစ်ထဲသို့ စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက် ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားကိုကျင့်သုံးမှု မရှိခြင်းက အချို့သော ဆင်းရဲဒုက္ခကို မသိနားမလည်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အနည်းငယ်သောအခြားအရာများရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခများကို သက်သာစေခြင်းဖြင့် ကျေနပ်အားရဖွယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရားဟာ လူသားသတ္တ၀ါတစ်ယောက်နှင့် အခြားသော အရာဝတ္ထုများအကြား ကွဲပြားခြားနားမှုကို မပြုနိုင်ပါ။ ပြီးတော့ ဘာသာတရားက အခြားသောအရာများအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခတိုးပွါးနေခြင်းရဲ့ အဖိုးအခကနေ - အချို့အရာအတွက် ကြွယ်ဝပေါများနေစဉ် - ပိုလျှံချမ်းသာသည့်အနေဖြင့် အကျိုးဆက်ပေါ်ပေါက်တဲ့ အချို့အရာကို - မသိကျိုးကျွံပြုတဲ့ စနစ်နှင့်မဟာဗျူဟာများကို သဘောတူ မရပ်တည်နိုင်ပါ။
သတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကို အဆုံးသတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးသောဘာသာတရားက ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတာ အကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ညီညီညွတ်ညွတ်ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်တဲ့ မဟာဗျူဟာက ဘာသာတရားကို တည်ထောင်သူများရဲ့ အခြေခံသဘောထားအမြင်မှ ဒါမှမဟုတ် မူရင်းဒေသနာတော်များမှ မြစ်ဖျားခံစီးဆင်းရပါ့မယ်။
ဘာသာရေးအချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းများဟာ အချိန်အခိုက်အတံ့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းဟာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းသက်သက်အတွက် မဖြစ်သင့်ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့ အပူတပြင်းပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရပါ့မယ်။ ဒီအရာများဟာ စနစ်ကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ဆိုင်ရာ ရှည်လျားကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းတည်တံ့ နိုင်စွမ်းအား ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်တယ် ဆိုတာနှင့် ဆက်စပ်ပါတယ်။ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား ဆက်လက်တည်မြဲနိုင်စွမ်းအားကို သဘာဝရင်းမြစ်များနှင့် လူသားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချတဲ့အပေါ်မှာ အခြေစိုက်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ လူသားရဲ့ အလျဉ်းမပြတ် အဆက်မပြတ် တည်မြဲနေခြင်းက အာလုံးသောဘ၀ပုံစံများရဲ့ ယေဘုယျအကျိုးတရားအတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါတယ်။
သဘာဝရင်းမြစ်များကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ရင်းမြစ်များဟာ အကန့်အသတ် မရှိနိုင် - ဆိုတာက ယုံကြည်ဖို့ရာ ယုတ္တိမရှိ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရင်းမြစ်များအတွက် အကန့်အသတ်ရှိလျင် သုံးစွဲခြင်းအတွက် အကန့်အသတ်ရှိရပါ့မယ်။ ဘ၀ကို ခိုင်မာတည်တံ့ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာအတွက်နှင့် ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းမှာလည်း ညီမျှတူညီရပါ့မယ်။
သုံးစွဲခြင်းအတွက် ရရှိနိုင်တဲ့ - အရာကို ကန့်သတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံလျင် ၊ အလိုဆန္ဒများရဲ့ မြှောက်ခြင်း အဆတိုးခြင်းနှင့် - ထုံးတမ်းဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် တိုးတက်ယဉ်ကျေးလာတဲ့ ခေတ်မီလူမှုအဖွဲ့အစည်ရဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ မြှောက်ခြင်းအဆတိုးခြင်းဟာ - မရပ်တည်နိုင် ခုခံကာကွယ်ခြင်းငှါ မစွမ်းနိုင်ဆိုတာကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ထင်မြင်ယူဆတဲ့ - အခြေအနေတစ်ခုကို လက်ခံရပါမယ်။
အများအတွက် ငြင်းပယ် ပိတ်ပင်တားမြစ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကို အကြမ်းဖက်တဲ့ နည်းလမ်းနှင့် နှိပ်နင်းဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်သာလျင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်ယုံကြည်မှုကိုမဆို ထောက်ခံအားပေးမှုရဲ့ အခြေခံကဲ့သို့ သနားခြင်းကရုဏာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလားမားက ၁၉၉၀- Amsterdam ကွန်ဖရင့်မှာ ပြောကြားခဲ့စဉ် “compassionate economy” ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို စကားလုံးသစ်အဖြစ် ထွင်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ တာဝန်ယူခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူခြင်းအပေါ်မှာ ဆက်စပ်မှု ရှိနေပါတယ်။ အကျွပ်နုပ်အနေဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာ အတွင်းစိတ်သန္တာန်ကို ကြည့်ရှုရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပြီး - ဂေဟဗေဒကတော့ သက်ရှိဇီဝရုပ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အကြား ဆက်သွယ်ပေးမှုကို ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“အာကာသအပေါ် လေထုရဲ့အစီအစဉ်တကျ မှီခိုနေရမှု - လေထုအပေါ် ရေရဲ့အစီအစဉ်တကျ မှီခိုနေရမှု - ရေအပေါ် မြေကြီးရဲ့ အစီအစဉ်တကျ မှီခိုနေရမှု - မြေကြီးအပေါ် သက်ရှိသက်မဲ့ဘ၀ရဲ့ အစီအစဉ်တကျ မှီခိုနေရမှု” ဒီစကားရပ်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓက သတင်းစကား ပါးထားပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သတင်းစကားဟာ ကျွန်း ကိုင်းမှီ ကိုင်း ကျွန်းမှီ တစ်ခုကိုတစ်ခု အမှီပြုခြင်းအပေါ် ဆီလျော်လိုက်ဖက် သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
ဂေဟဗေဒစနစ်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူခြင်းများမှာ - သက်ရှိအားလုံးက အားထားမှီခိုရတဲ့ အပင်နှင့်သတ္တ၀ါတို့ သဘာ၀၀န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီစွာ ဖွဲ့တည်မှုဂေဟစနစ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ - သက်ရှိအားလုံးကို အားဖြည့်တည်တံ့စေတဲ့ လေ, မြေ, ရေကို ညစ်ညစ်စေခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားဖို့ - ကုန်ခန်းလျော့နည်းလာခြင်းကို နည်းနိုင်သမျှနည်းစေဖို့ - ကမ္ဘာလောကဓာတ်ဆိုင်ရာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရှုမြင်ကွင်းမှာ သက်ရှိဇီဝအားလုံးကို ဖြည့်တင်းဖို့နှင့် ထည့်သွင်းပါရှိဖို့အတွက် ဦးတည်ကြိုးပမ်းဆောက်ရွက်မှုကို များနိုင်သမျှများအောင် အကောင်းဆုံး အသုံးချဖို့ - ဤသို့ တာဝန်ယူခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
သနားခြင်းကရုဏာနှင့်ပတ်သက်လို့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီများရဲ့အယူအဆကို ချီးကျူးထောမနာပြုတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်ကို သုတ်တော်တစ်ခုရဲ့ပုဒ်စုတစ်ခုမှာ “ဗဟုဇနဟိတာယ - ဗဟုဇနသုခါယ = အများရဲ့အကျိုးတရားအတွက် - အများရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်” လို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အပေါ် ဒါမှမဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိသားစုများ, သူငယ်ချင်းများရဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းအပေါ်မှာ အတွေးများ, အပြုအမူများ အားလုံး ဗဟိုအချက်အချာအဖြစ် ဆုံမှတ်ထားခြင်းအစား - အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒီအ၀န်းအ၀ိုင်းအပေါ် ကျော်လွန်ပြီးတော့ သွားသင့်ပါတယ်။ အများအတွက် တွေးတေားရပါ့မယ်။ အများအတွက် အလုပ်လုပ်ရပါ့မယ် - လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက အကျွန်ုပ်တို့ကို မိန့်မြွက်ထားပါတယ်။
မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကရုဏာနှင့် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကမ္မဌာန်း အားထုတ်ခြင်းဟာ ဗောဓိသတ္တအပြုအမူနောက် လိုက်ပါတဲ့ မဟာယာနကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသူများရဲ့ အမြင့်မားဆုံး သဒ္ဓါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Friday, April 01, 2011